Fedora 17 ayaa si rasmi ah loo sii daayay | Laga soo bilaabo Linux
Fedora 17 ayaa si rasmi ah loo sii daayay
Ugu danbeyn!!! Sugitaanku wuu dhammaaday, waxaan horeyba u haysannay ogeysiiska rasmiga ah ee soo saarista noocyadan cusub ee Fedora, taas oo la timid horumar badan iyo warar. Arintaan, waxaan aad ugu talinayaa inaad aqriso maqaalka: Ugu Fiican Fedora 17 maadaama aysan wax qashin ah lahayn (mahadsanid Jamiin-Samuu'eel xiriiriyaha;)).
Soo dejiso Fedora 17
Isku day inaad u adeegsato iskuxirayaasha adoo maraya durdur si aad uga fogaato inaad ku qanciso barnaamijyada soo dejinta;).
Haddii qof xiiseynayo oo yaqaanno Ingiriisiga qaarkood: P, waxaad arki kartaa fiidiyaha soo socda, oo ay soo dejiyeen ragga ka socda Fedora halkaasoo ay uga hadlayaan sii deynta weyn:
Hadda haddii walaalo, soo dejiso ayaa la yiri;).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Fedora 17 ayaa si rasmi ah loo sii daayay
Waxaan durba kujiraa Fedora 17 (Beefy Miracle). : p
Hambalyo: D. Waad salaaman tihiin bro;).
Mahadsanid, waa waxa aan ugu jeclahay GNU / Linux iyo dhamaan noocyadi hore iyo deegaanadooda desktop sida: Fedora KDE, Fedora Gnome iyo hada Fedora XFCE way ii shaqeeyeen 100% waana sababta aan wali aamin ugu ahay Fedora 🙂
DHAQAN !! Ku rakib dhammaan waxyaabaha muhiimka ah, hadda waxaad ku raaxeysan doontaa Fedora 17 oo leh XFCE: p
Weyn 🙂 in hoos loo dhigo. Buuggeyga 'Fedora 16 netbook' oo ay la socoto XFCE, waxaan filayay in la sii daayo Fedora 17.
Waa wax lagu farxo in aan markale ku arko halkan saaxiib, salaan iyo mahadsanid ka dhiibashadaada :).
Habeen wanaagsan Mudane Blogger
Caawa waxaan hayaa labo su'aalood oo aan rajeynayo inaanan ku dhibin, tan koowaad waa tan soo socota, daaqadaha markii la qorayo FN + fallaarta shaashadda ayaa yareysay dhalaalka ama kororka ipso facto laakiin fedora ma dhaceyso ilaa aan dib u bilaabo mooyee, sikastaba tan Qaabeynta ayaa lumisa marka la xidhayo tan ma la hagaajin karaa? sidee?
Su’aasha labaad waa tan
Gnome-Sanaaduuqda xulashada url ayaa soo baxaysa, maxaa loogu talagalay? mise suurtagal baa ah in haddii aan daaqado ku leenahay qayb kale aan ka bilaabi karno sanduuqyada gnome-ka sidii iyagoo muuqaal ah?
Qalabkeygu waa acer aspire 4750 core 5. 6 wan iyo Intel 3000 sawiro
Ka waran Alberto, dhibaatada fn + (x key) furayaasha laptop-kaaga waxaa lagu xalin karaa adoo hagaajinaya faylka Xorg.conf (laga yaabee inay jiraan wado kale), markii wax laga badalayo feylka la sheegayo waxay ogolaaneysaa in la ixtiraamo isbedelkan si joogto ah, in waa,, isbedelada laguma lumi doono marka dib loo bilaabo ama la xiro kombiyuutarka. Hadda, su’aashaydu waa tan, ma dhibaatada keliya ee aad ku haysataa kombuyuutarkaaga? Tusaale ahaan, xaaladaha qaarkood taabashadu si sax ah ugama shaqeyso qaybinta kala duwan (aniga ayey igu dhacday), iwm.
Sida sanduuqyada gnome-ka, waa codsi kuu oggolaanaya inaad si hufan u shaqeyso nidaamyada hawlgalka ee maxalliga ah (oo aad ku rakibtay sanduuqyada gnome-ka) ama meel fog (taas oo ah, helitaanka mashiin dalwaddo ah oo ku yaal kombiyuutar kale, iyada oo loo marayo internetka ama maxalliga ah shabakad), waxaa la dhihi karaa waa mid ka duwan Sanduuqa Virtual. Marka waxaan ka xumahay inaan kuu sheego inaadan maamuli karin Windows (kaas oo ku yaal qaybtaada kale) halkan :)
PS: Waxaan ilaaway inaan ku daro taas si sax ah taas darteed waxaa jira ikhtiyaarka url ee sanduuqyada gnome-ka, markaa waad gali kartaa cinwaanka url ama IP ee kombuyuutarka fog meesha mashiinka dalwaddu ku yaalo.
@Alberto: Furayaasha xakamaynta dhalaalka waa inaad wax ka beddesho faylka / iwm / default / grub ee qaabka xididka. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa sadarradan:
GRUB_DEFAULT = waa la keydiyay
GRUB_CMDLINE_LINUX = ”rd.md = 0 rd.lvm = 0 rd.dm = 0 xasilloon SYSFONT = latarcyrheb-sun16 rhgb rd.luks = 0 KEYTABLE = en LANG = en_ES.UTF-8
Waa inaad kudartaa halbeegga safka "GRUB_CMDLINE_LINUX ="
Marka waxay u egtahay sidan:
GRUB_CMDLINE_LINUX = ”rd.md = 0 rd.lvm = 0 rd.dm = 0 xasilloon acpi_backlight = iibiye SYSFONT = latarcyrheb-sun16 rhgb rd.luks = 0 KEYTABLE = en LANG = en_ES.UTF-8 ″
Keydso ka dibna Terminal, had iyo jeer asal ahaan, cusbooneysii Grub amarkan:
Dib u bilow oo voila.
Juan Carlos xalku waa qumman yahay, si kastaba ha ahaatee waxaan qabaa su'aal adiga ama Perseus aad ka jawaabi karto haddii aad rabto
Maxay tahay ama maxay tahay sababta uusan nidaamku si otomaatig ah u shaqeynin shaqadan?
Waad ku mahadsantahay caawimada taasi waa waxa wanaagsan ee ku saabsan bulshada isticmaaleyaasha software-ka bilaashka ah ee qof walbaa diyaar u yahay inuu caawiyo
Ku jawaab albert345
@ albert345: Dhammaan buugaagta xusuus-qorrada iyo netbook-ku ma wada laha isku-duwaha furaha isku mid ah. Inta aan ogahay, xalka aan ku siiyay kama wada shaqeynayo dhamaan laptop-yada, wuxuu ka shaqeeyaa Acer, Samsung waxaanan filayaa sidoo kale Lenovo. Waxaan leeyahay saaxiib adeegsada HP, midkaasna ma shaqeynayo.
Ma jiraa qof og haddii laga cusbooneysiin karo 16?
Waxaa laga yaabaa in maqaalkani kaa caawin karo inaad bro: https://blog.desdelinux.net/how-to-actualizar-a-la-nueva-version-de-fedora-con-preupgrade/ ;).
Perseo iyo bootie Fedora 17 ... qaabka ay ugu shaqeyso terminal waa Wanaagsan ... xaqiiqdii waxaan sameeyay waxyaabo aanan waligey sameyn xD axis oo aan bartay ^ _ ^
Waxa kaliya ee aanan fahmin waa maareeyaha baakadka ee cajiibka ah ee leh asal ahaan: Haa Ma aqaano sida loo rakibo barnaamijyada ... Ma aqaano inay ku socoto terminal ama inuu marayo maareeyaha xirmada ... Sikastaba ... Ma aqaano sida wax loogu rakibo Fedora ahahaha (waxaan jeclaan lahaa inaan barto)
Ogsoonow in nooca diirku yahay 3.3.7 (cajiib ah) .. Waxaan u maleynayaa inay tahay tan ugu sarreysa illaa hadda .. xitaa ka sarreeya Debian ayaa leh .. haddii kale qofna i sixi maayo
Miyaad sameyn kartaa qoraal ku saabsan sida loo rakibo codsiyada Fedora?
oh iyo hadiyad ahaan ... sharax sida loo rakibo mawduucyada 'Elementary icons' iyo waliba "msttcore-fonts" kuwaas oo ah noocyada Microsoft Ejeje
sudo yum raadinta magaca raadinta
sudo yum rakibi nameoftainstall
Waxaan isku dayi doonaa anibal ... mahadsanid!
Waxaad si toos ah uga sameyn kartaa terminalka ama maamulaha dalabka PackageKit (Gnome, LXDE, XFCE) ama Apper (KDE).
Tilmaamaha yar ee lagu rakibo Fedora:
Soo hel wax walba oo la xiriira:
sudo waxaa loo isticmaalaa waqtiga la rakibay ... maadaama aan wali ku jiro qaab Live waxaan uun gelinayaa yum ..
laakiin hada waxaan tijaabinayaa hadii la helo codsiyada aan ubaahanahay.
Waxay ila muuqataa inay sidan uga fudud tahay terminal marka loo eego PackageKit .. waxaas waa wax aan la fahmi karin
mmm ... badankood ma heli doontid ilaa aad ka rakibtid RPM Fusion repo, Fedora waxay leedahay 100% softiweer bilaash ah warshadda;).
ahhhhhhhhhhhhh…. waa hagaag taasi waa wax kale…. runtii ma aanan ogeyn ...
si aad u soo dejiso DVD ka markaa xD
jamin-samuel maaddaama sudo naafo ahaan ay u naafoobi weyday si ay u hawlgeliso u raac qormadan:
Runtii waan ka helay tusmadaas maxaa yeelay waxaad ku hawlgelisaa hal, amar fudud oo fudud.
Jawaab Diego Campos
Xaaladdayda waxaa loo hawlgeliyay si aan caadi ahayn;). Waxa ugu fiican oo dhan ayaa ah in Red Hat ay horey u dhajisay nuglaanta ku jirtay suudo, sidaas darteed, in kasta oo aan si fiican lagula talin karin, ugu yaraan way ka ammaan badan tahay adeegsiga :).
@Perseo hehehe hadii aanan ogeyn, ma fedora 16 ayaa naafo noqotay sikastaba waxaan hada soo dagsaday fedora 17 oo leh kde waxaanan arki doonaa sida wanaagsan ee ay uheysato baraha bulshada.
Fedora marwalba way ka casrisan tahay Debian 😉
Huuuuu waan tijaabinayaa laakiin ma jecli ... Salaan ...
Haa haa, aniga waxaa ii fiican in la isticmaalo terminal-ka maaddaama xirmada xirmaddu aysan waxtar ii lahayn aniga (waa waxa kaliya ee aan u soo qaatay fedora 😛) si loo hubiyo xulashooyinka qoto dheer ee yum si fudud u qor «yum» muuji dhammaan xulashooyinka suurtagalka ah, sida astaamaha aasaasiga ah kaliya waa inaad qortaa:
yum rakibi aasaaska-icon-theme
maaddaama ay ku jirto bakhaarrada iyo msttcorefonts waa inaad ka raadisaa xirmada .rpm ee internetka, kaliya qoritaanka google ayaa kugu filan 😉
Xuddunta qaansoleyda waxay ku taal 3.3.7-1 in ka badan 3 toddobaad ama sidaas, kaliya macluumaad, heeee?
Miyuu noocani yahay meesha aad ku isticmaali karto Gnome 3 adigoon xawaaraha sawirada?
Taasi waa sax, waxaan in muddo ah u adeegsan jiray wadayaasha bilaashka ah wax xunna ma ahayn haba yaraatee, xoogaa dib u dhac ah ayaa kolba mar dhaca.
Aaaaahhhhhh !!!!!… .sidaas ayaan ku seegay xawaaraha howsheyda ee mashiinkeyga… cadaabta Ubuntu si kasta oo ay LTS u tahay. Faa'iido maleh, markaad ku korto distoor marwalba waxaad dib ugu laabanaysaa ilaha laga helo.
Waxaan idhi tan ugu fiicani waxay ahayd F-16, laakiin 17-ka ayaa ah mid kulul. Iyo, Perseus, intaas oo dhan ayaa khaladkaaga leh….
Aaaaahhhhhh !!!! sidaan xawaaraha ugu xiisay mishiinkeyga. Cadaab Ubuntu iyada oo aan loo eegin sida ay u tahay LTS. Aniguna waxaan idhi Fedora 16 ayaa ugu fiicnayd, laakiin F-17 waa mid kulul.
Waxaan ku dhacay jirrabaadda, mar labaad iyo saaxiib Perseus, qayb ka mid ah khaladka adigaa iska leh ... hehe
AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA \_ O / \_ O / \_ O /
Waxaan rakibaa habeenkii ... Wali waxaan soo dejinayaa DVD-ga
dhowaan waxaan u duuli doonaa xD
XD wanaaga waa lawadaagaa bro XD.
Hal dhibaato oo keliya ayaa i haysata oo aanan xallin karin. Ma garanayo sababta Evince kaliya ii toogto oo uu u doonayo inuu ugu shaqeeyo faylalka .xps. Waxaan processor-ka uqaadayaa 100% iyo heerkulka 80º.
Waqtigaan la joogo, waxaan doortay in aan tirtiro Evince oo aan rakibo Xpdf halkii, waan arki doonaa waxa dhaca.
Wow, sidee yaab leh !!! Ma waxaad ka rakibtay Live ama DVD? Furan si aan u baaro sababta, waxaan ka rakibay Live ka RC1 mana aanan soo bandhigin wax dhibaato ah xilligan. Waxaan isticmaalayaa Gnome, ma aqaano inaad adiguna sidoo kale tahay.
Laga soo bilaabo Live, durdurka DVD-ga aad ayuu uga gaabiyay soo dejintiisa saaka, sidoo kale waxaan isticmaalaa Gnome. Waxaan ka heli doonaa jidka ku hareeraysan, maxaa yeelay Xpdf wuu xadidan yahay.
Wax yaab leh ...
Hagaag waxaan soo dejinayaa DVD-ga si aan uga fogaado waxyaabo yaab leh.
Wax yar ayaan marayaa bartamihii "xawaaraha xD" laakiin kalsooni ayaan qabaa oo xasilan 😛 Waan iska tuuraa.
Waan waalanahay inaan bilaabo isticmaalkeeda ..
Hagaag, tani waa waali, laakiin waa Fedora waana waxyaabo inta badan dhaca. Waxaa ii soo baxday inaan bilaabay inaan dib u eego wixii aan sameeyay ka hor inta uusan Evince igu keenin dhibaatadaas, waxaanan gartay inay bilaabatay ka dib markii aan rakibey daabacaha…?. Waxay noqoneysaa waan rakibay laakiin wali wax daabic ah ma sameyn. Waxaas oo dhan durba waan ka fogeeyay Evince.
Waxaan daabacay dhowr waxyaabood oo aan sugayay, ka dibna dib ayaan u soo celiyey si aan u arko haddii ay khaladka heshay, iyo oh la yaab! mar dambe ma dhacayso ... Waxaa la arkaa in wax uun la sugayay ka dib markii la rakibey daabacaha, taas oo sababtay Evince inuu abuuro fayl XPS ah oo uusan joojin "ka shaqeynta". Ma wuxuu iga sugayey inaan sameeyo daabacaadda tijaabada? Runtii wax fikrad ah kama haysto, waa markii iigu horeysay ee wax sidan oo kale ah igu dhacaan.
Hagaag, haddii ay ku dhacdo qof, waad ogtahay waxa ay tahay.
Wow mahadsanid @Juan Carlos caaradda;).
Ku rakib epdfview. =)
Mar labaad soo dhawow…! Fedora 17…! Aad u fiican…!
Waxaan u sheegayaa walaalkay, fiiri, fedora 17 way baxday! Wuxuu igu dhahaa, waxaad ka badasheysaa wax ka badan surwaal.
Ma jiraa qof laga cusbooneysiiyay nooca 16? ma waxad ka soo rakibtay xoq ama sidee baad samaysay?
Waxay ku sameeyeen casharradan ama ma jirtaa hab ka fudud oo dhakhso badan?
Waxaa jira qoraal loo yaqaan 'Fedora Utils' oo kuu oggolaanaysa inaad rakibto barnaamijyo badan oo dhowr riix ah oo aad doorato waxaad rabto inaad rakibto, koodhadh loogu talagalay maqalka iyo fiidiyaha, ilaha, iyo barnaamijyo badan oo software ah> http://fedorautils.sourceforge.net/ ***** Halkan sawir> http://www.zimagez.com/zimage/screenshot-05302012-104657pm.php ***** Waxaan rajeynayaa inay wax badan kaa caawin doonto! 🙂
Shakhsiyan, waxaan ku rakibay Fedora 17 xoq. 🙂
rakibi Fedora 17, waxay u dhacdaa si aad u fiican oo dhakhso badan. (Gnome)
Sidoo kale rakibi Java 7, laakiin kuma imaanayso javac. Ma jiraa qof garanaya sida loo rakibo java jdk, ulama jeedo java-1.7.0-openjdk, laakiin midda la timaadda amarka javac 😀
Fedora 17 casaan
iyo xitaa in ka badan oo leh astaamaha Fedora ama Echo oo lagu daray Cinnamon iyo xoogaa isbeddello ah 🙂
Anigu waxaan ka mid ahay kuwa u maleynaya in marka aad wax ku bilowdo aad dhameysato ama ugu yaraan aad si fiican u horumareyso ka hor intaadan isku deyin inaad waxyaabo kale qabato, waxaan ahay qof si daacad ah u adeegsada Debian waxkastoo khadkaas ka yimaadana waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan oo la aqbali karo ixtiraamka aan u hayo qaybintaas iyo natiijooyinka aan soo arkay.
Laakiin waxaad ii dhaqaajineysaa inaan isku dayo wax inkasta oo mabda 'ahaan aan diiday inaan ku celiyo xasilloonida iyo waxqabadka Debian, laakiin waxaan aaminsanahay in xilligu ku dhow yahay meeshii aan ka bilaabay wixii aan bilaabay, waxaan ku dari doonaa hal qayb oo dheeri ah, maxaa yeelay RH / Fedora folks sidoo kale waxay boos ku leeyihiin deegaanka xasiloonida iyo shaqeynta taasna kama saari karo madaxayga.
Soo bandhigiddan yar ka dib, waxaan ku dari doonaa hal hawl oo dheeraad ah liistada la sugayo guud ahaan Gnu / Linux.
Dhamaan kor ku xusan = waan rakibi doonaa
Is arag danbo ...
I rumee, Fedora waa mid aad iyo aad u deggan laakiin isla markaa waa mid aad u casriyeysan oo la cusbooneysiiyay, dhab ahaantii cusbooneysiinteeda ayaa la mid ah Debian iyo xitaa in ka badan oo ay leeyihiin falsafad la mid ah, halkan waa wareegga cusbooneysiinta Debian marka loo eego kan Fedora:
Xasiloon = Fedora Final
baaritaanka = Fedora baaritaanka (alfa / beta)
deganayn = Randhide
Sida aad u aragto maahan wax aad u kala duwan, kaliya halkaan Fedora waxay leedahay xirmooyin aad loo casriyeeyay oo si fiican loo tijaabiyay, waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay oo haddii aad rabto wax u dhigma sida Gnome 2 laakiin Gnome 3 waxaan kugula talinayaa Cinnamon; saaxiibkeen Perseus ayaa qoray sida loo rakibo halkan: https://blog.desdelinux.net/how-to-fedora-instalar-cinnamon-como-alternativa-a-gnome-shell/ ama waad isticmaali kartaa KDE ama XFCE 🙂 Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay oo aad aragto in Fedora iyo Debian aysan aad u kala duwanaan mooyee xirmooyinkooda 🙂
Waxaan u maleynayaa sidaada oo kale! Waxaan u isticmaalaa fedora maxaa yeelay waxay umuuqataa sida distro aad u xasiloon, iyo wixii ka sareeya oo dhan.
Waxaan raadinayey rom oo dhameystiran (darawalada) sida ubuntu, laakiin xasilloon sida debian (ubuntu uma muuqato mid xasilloon haba yaraatee, tusaalooyin iyo tijaabooyin dhowr ah).
Fedora 16 waxaan ku helay taas, 100% xasiloonida iyo waliba qolofta gnome ee aan jeclahay iyo dhamaan baakadaha cusub ee la tijaabiyay.
Ma is barbar dhigi kartid Debian iyo Fedora oo ma qori kartid inay leeyihiin falsafad la mid ah. Tijaabada Debian waa mid xasiloon sida Fedora-kii ugu dambeeyay (laga yaabee intaas in ka badan). Fedora waxay u hurtaa xasiloonida si ay u bixiso hal-abuurnimo.
Lex .RC1 dijo
imtixaan, xasilooni badan oo hadda socda sidoo kale ...
adigoon rabin inaan galo doodaha cunsuriyada, laakiin waxaan ahay tafaariiqle wax walba ka sareeya ... Xitaa kuma aanan arkin hal wiil oo madow ah sawirada bogga Fedora, midna maahan, dhamaantood waa cadaan, casaan iyo ciil laakiin ma ahan hal madow ... ¬¬
Jawaab Lex. 1
Juan Carlos Sawirkee ... weeye?
Kuwani waa Carab, sidoo kale waxaa jira Latinos, laakiin ma jiraan wax madow oo Afro ah ... Haddii aad ula jeedo qariibka dhexdiisa ah, waxay noqon kartaa Shang Shung dhamaadka :)
Dabool sawirka, safka saddexaad, labaad bidix; safka toddobaad, labaad bidix ilaa midig; hadday kuwani caddaan yihiin oo casaan yihiin, anigu waxaan ahay Marie Antoinette …… Oo markaan fiirinayo calooshayda, waxaan kuu xaqiijin karaa inaanan isku si u wada ekaanin.
Perseus wuxuu sameynayaa dadaal weyn si uu dadka uga dhaadhiciyo inay adeegsadaan 'disrora weyn' oo sharaf leh oo ah Fedora, laakiin dadka isticmaala Linux ee aysan ku qancin Fedora, taas oo xaqiiqdii ay jiraan, waxaan kugula talinayaa Archlinux: xasilloon (Waxaan ahaa sanad isticmaalkeeda iyo Wax dhibaato ah kalama kulmin), waa la cusbooneysiiyay lana qaabeyn karaa sida tan oo kale.
Horaanba ugu haystay Spin LXDE gacmahayga 😀 Markaan wakhti helo waan rakibi doonaa oo si fiican ayaan u tijaabin doonaa. Sii wad boostada Fedora, Perseus!
Waxaan isticmaalaa Kubuntu 12.04 waxaanan u arkaa inay deggan tahay.
Laakiin waa FEDORA.
Waxaan arkayaa xirmooyin badan oo .deb ka badan .rpm
Duqeyntii Fedorian-ka ayaa culeys ku haysa maskaxdaada ;-). Waxaan kugula talinayaa tallaal: Ku rakib Fedora sida ugu dhakhsaha badan.
Waa la dhammeeyay.
Kaliya waxaan u arkaa waxoogaa gaabis ah ????
Laakiin aan aragno sida ay u dhaqmayso saacado yar gudahood, haddaanay furinSUSE 😀
Nooo waan ka helay 🙁
Ku noqoshada kubuntu oo ay weheliso qaanso 😀
Kaliya xiisaha awgeed, nooca ama wareejinta Fedora ee aad isku dayday?
@ kik1n, durba waa lagaa tallaalay.
@Perseo, waa inaad isticmaashay daabacaadda KDE.
Kala soo bax labada DVD 32 (PAE) iyo 64.
Rakibaadda waxay socotaa 30 min.
Aad uguma fiicna KDE.
Kubuntu ama Arch oo lagu rakibay 32 (pae):
(K) 10 ilaa 15 min rakibay.
Gawaarida (salka) 6 daqiiqo (ugu badnaan), Arch + K oo ah 10 min 😀
(K, A) Deg deg iyo dheecaan.
Fedora 16 waxay si dhakhso leh ugu socotey kumbuyuutarkeyga laptop-ka iyo desktop-ka oo ay la socoto F17 pfff qoolley.
Perseus, waan kuugu hanbalyeynayaa waxtarkaaga, waad ku mahadsan tahay dadka kula midka ah. balooggan waa muhiim.
Waxaan ku sameeynaa saaxiib farxad leh :).
Waad ku mahadsantahay joojinta iyo waqtiga aad siisay inaad faallo ka bixiso;).
Sideen uga dhigi karaa farta Arial inay ku shaqeyso google chrome inta aan joogo fedora?
rakibo baakad la yiraahdo "msttcore-fonts" .. Waan furi karaa xuriyadda waxaanan dooran karaa warqadda arial dhib la'aan
laakiin biraawsarka waxaan ku doortaa arial qaabeynta noocyada waxna ma dhacaan: /
qof ayaa ii sheegay inaan rakibo xarfaha farta ah si aan u xaliyo dhibaatooyinka font ka bixinta google chrome.
waxayna i siiyeen xiriiriyahan
ii sheeg .. tani ma xalin kartaa dhibaatadayda?
Ka waran bro, waxaan ku rakibaa noocyada Microsoft sidan:
Ka dib qoraalka wuxuu dhammeeyaa rakibidda noocyadaas, waxay ku weydiineysaa inaad dib u bilowdo nidaamka, dib u bilow. Xaaladdayda, farta xarfaha waxaa lagu hawlgeliyay hab ahaan marka loo eego chromium, gabi ahaanba waxba kamaan qaban ¬.¬
Waxaan rajeynayaa inay tani waxtar leedahay;).
jamin-samuel, kugula talin maayo inaad ku rakibto astaamaha Microsoft maxaa yeelay waxaa loo diyaariyey mishiinka sameynta Windows, tayada font waxaa gacanta ku haya desktop-ka, maahan distro, kiiskaaga Gnome oo wuxuu la yimaadaa Cantarell horay loo sii qeexay, taas oo ah a ikhtiyaar ka fiican Windows fonts, haddii aad u baahan tahay inaad rakibto Arial, isticmaal Liberation, Dejavu ama Droid oo ku siinaya natiijooyin aad u wanaagsan.
Chorme wuxuu la yimaadaa xarfaha hore loo dhigay oo leh far iyo xajmi go'an, si aad u bedesho waxaad aadeysaa «Dejinta / Hooska hoostiisa" xulashooyinka "Waxyaabaha Websaydhka ah" ee aad ku leedahay «Font size» halkaas ayaad wax walba ku beddeleysaa.
Fiiro gaar ah: Si loo hagaajiyo xarfaha Gnome waxaad rakibaysaa qalabka 'gnome-tweak-tool' iyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah waxaad u badashaa sida ku xusan kormeerahaaga;
Haddii aad leedahay kormeer CTR (laba jibbaarane)
Haddii aad leedahay LCD, Flat ama Led monitor
Ikhtiyaarka buuxa ee Hunting waa la hawlgeliyaa haddii aad haysato kaar fiidiyoow oo wanaagsan. Tani waxay si weyn u hagaajineysaa bixinta ilaha. :)
jasmin-samuel laguma talinayo in lagu rakibo foomamka Microsoft, maaddaama ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan mishiinka wax ku siinaya Windows, xaaladdan Gnome, oo la socota Cantarell. Haddii aad u baahan tahay inaad rakibtid adeegsiga Arial Liberation, Dejavu ama Droid oo ku siin doona natiijooyin wanaagsan.
Ku beddel farta loo yaqaan 'Chrome font' ee 'Dejinta / hoosta Hoodka: qaybta' 'Waxyaabaha Webka' 'dooro habee oo u qaabee sida aad rabto
Fiiro gaar ah: Tayada noocyada waxaa gacanta ku haya desktop-ka, maahan distro-ka, Gnome waad ku hagaajineysaa adigoo ku rakibaya "gnome-tweak-tool" xulashada Fonts.
Loogu talagalay kormeeraha CTR (ee godadka)
Loogu talagalay LCD, Flat ama Led
Xulashada buuxda ee loo yaqaan 'Antialiasing' waxaa loo isticmaalaa kaararka fiidiyowga ee xoogga leh. 🙂
offtopic sidoo kale wuxuu u soo baxay linux Bridge kuwa doonaya qaanso fudud.
Waxaan ka imid Fedora (@ _ @ @)… ahahahajajajaj
cajiib ah .. 😀
ku rakibidda DVD-ga waa ammaan .. wax walbana waa damqasho xD
waxay kugu qaadanaysaa waqti dheeri ah inaad isku hagaajiso nidaamka markii la rakibo lana cusbooneysiiyo.
wax walba oo halkan jooga waa kuwo aad u fiican 😀
Waxa aan u baahanahay waa inaan rakibo waxyaabo kale ... waxa kaliya ee layaabka leh ayaa ah inaan rakibo skype .rpm oo aan ka soo dejisto bogga oo ay si sax ah u rakibo laakiin markaan fuliyo waxay ii sheegtaa inaysan heli karin galka.
Perseus, waad ku mahadsantahay qoraalkan wanaagsan waxaanan rajeynayaa dhowaan inaan iskaashi ka sameeyo sida loo Fedora
Sure bro, markasta oo aad jeceshahay: D.
Hagaag waan jecelahay muuuuuuuuuuchisimooooooooo waxay rakibeen fedora 17 ... phew waxaan dareemay inaan dareemayo fasal xD cusub waxaan dareemayaa inaan waliba bartay ..
laakiin aniga daacad baan u ahay nafsadeyda .. Kama badali karo distoorka nooc cusub oo kernel ah (oo si aad u wanaagsan loo rakibi karo marka laga reebo Ubuntu 12.04) ..
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxa ay sameynayaan ragga ka socda fedora (@ _ @)
laakiin runtu waa tan "Waan ku qanacsanahay inaan ka shaqeeyo ubuntu xD" ejehehehe
Waan sameeyaa oo waan furaa wax kasta oo aan doono "maxaa yeelay waxaan horeyba u aqaanaa nidaamka si aad u wanaagsan" laakiin fedora waxaan ka baranayaa xoqid ...
Waxaan u maleynayaa waxa aan qorsheynayo in aan sameeyo ay tahay ubuntu 12.04 oo lagu rakibay fedora 17 si aan loo damin barashada fedora 🙂
@Perseo Waad ku mahadsantahay dhiirigelinta xad dhaafka ah ee fedora 😀 😀
Mahadsanid saaxiib, halkaan kuma ekaanayo, waxaan sii wadi doonaa ka hadalka Fedora, waxaan hayaa qormooyin aad u xiiso badan dhuumaha;).
diyaar! Waad soo bixin kartaa markasta oo aad rabto 😉
Jamin Samuel sida muuqata waad la dhacsanayd fedora 17 oo aad leedahay laba-buudh dhawaaqyo aan caadi ahayn, laakiin, maadaama aad leedahay waxaad wax ka baraneysaa xoq waxaan jeclaan lahaa inaan kaa caawiyo adiga oo kuu soo gudbiya hage rakibo kadib oo aan isoo urursaday (waxaan leeyahay is ururso sababtoo ah runti waa macluumaad laga helay bogagga kale iyada oo loo marayo xD links) markii aan bilaabay isticmaalka fedora 16, hagaha waxaa loogu talagalay 16 laakiin uma maleynayo inuu jiro faraq badan oo leh 17 marka laga reebo hagaha isticmaalka Linux: P, waa tan hage
By habka, halkan waa wax wanaagsan oo ku saabsan sida loo rakibo kernel 3.4 ubuntu 12.04
hubi inaad qoraal ka sameyn karto arrintan tan ka soo baxda halkan
Hagaag, waan tijaabinayay ilaa xalay. Runtu waxay tahay waa inaan qirto inaan aad uga gaabsanahay Gnome 3, laakiin runtu ma xuma haba yaraatee. Waxaan ku guuleystey in aan qaabeeyo oo aan wax ka beddelo astaamaha aasaasiga ah ee muuqaalka, waana jeclahay arrinta. Waxaan garwaaqsanahay in kordhintu ay awood u siiso nidaamka wax walbana aad u fudud. dhinac, waxaan dareemayaa Fedora, xilligan, aad u deggan oo dhakhso badan.
Wanaagsan, waxaad had iyo jeer go'aansatay inaad tijaabiso XD. Waxaan sidoo kale u wareegay Gnome waxaanan bilaabay inaan jeclaado, ma jecli waxyaabo badan oo fiilooyin ah laakiin waxaan filayaa inay tahay inaan tijaabiyo 😛
diyaar, Waxaan u maleynayaa inaan horey u bedelay wakiilka isticmaalaha !!!!
Hambalyo 😀 😀
Aad baad u mahadsantahay lamaanahaaga !!!
Wanaagsan, habka loo maro cashar yar oo ku saabsan waxa la sameeyo ka dib markaad rakibto F17 oo uu qoray saaxiibkiis Manuel Escudero oo ka yimid magaalada Mexico ee ku taal barta rasmiga ah ee nidaamka Xenode Mexico: http://xenodesystems.blogspot.mx/2012/05/que-hacer-despues-de-instalar-fedora-17.html Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay
Perseus, sidee tahay
Dhibaato ayaan qabaa, kama jawaabi karo faallooyinka ka imanaya jamiin, wax kasta oo caadi ah ayaan sameeyaa, waxaan dhagsiyaa dirista mana muuqato.
Walaalayaal haye, dhibaatadaydu inta badan waa ciyaar yahanka tooska ah, tan iyo markii la furayo bog leh waxyaabaha ku jira flash-ka "Firefox" ayaa si lama filaan ah u xirmaya oo "opera" ayaa ka tagaya booska cawlan ee uu ku jiray waxyaabaha ku jira flash-ka, waa wax aad looga xumaado runtiina ma ' Waan ogahay sababta oo ah cilladan ayaa dhacda, waxaan jeclaan lahaa inaad i caawiso kaarkayga fiidiyowgu waa "heer sare" intel (dhammaanteen waan ognahay, in kaararkaasi ay ka xun yihiin fuck) xusuusteyda wan waa 4Gb oo processor-kayguna waa murugo intel core 2 labo. Laga soo bilaabo waayo-aragnimadayda Linux waxaan rabaa in aan ka fahmo in isku dhacu uu ka dhashay inta udhaxeysa flash iyo kaarkayga fiidiyowga. Aad baad ugu mahadsantahay 🙂
Haa, wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan inaad dhibaato kuqabtid muuqaalka xawaaraha qalabka flash. Miyaad isku dayday nooc duug ah oo flash ah? Waa maxay qaybinta iyo nooca dhismaha aad leedahay (i386, i686, x86_64)?
Ikhtiyaar kale ayaa noqon kara in aad tirtirto flash oo aad isticmaasho Chrome maadama ay leedahay wixii ku xirmay qaab ahaan.
Haddii aan mar hore isku dayay nooc hore oo ay siisay qalad isku mid ah. Qaab dhismeedka aan adeegsado waa x86_64 ... waana in la ogaadaa inaan necbahay Chrome iyo waxyaabaha ka dhasha qalbigayga oo dhan, in kabadan maxaa yeelay iyagu aad bay u jilicsanyihiin, laga yaabee inay aad u dheereeyaan laakiin aad u jilicsan yihiin
jenrry soto dexter dijo
waad salaaman tihiin asxaabta, waad salaaman tihiin bulshada oo dhan, waad ogtihiin inaan ku rakibey fedora 17 kde oo wax walboo hagaagsan yihiin, laakiin ma xakamayn karo iftiinka shaashadda fn + f5 iyo f6 fure waa qaab sony vaio VPCEK amd vision e2 leh iyo radeon hd aniguna waxaan horeyba u tijaabiyay wax kasta oo aan ka helo bogag kale laakiin guul la'aan sidoo kale shaashadda ayaan madoobaaday, aan dhahno 10 daqiiqo gudahood laakiin waxba ma dhacaan, la soco shaashadda iftiinka ugu badan, fadlan haddii qof i caawin karo, waad ku mahadsantahay salaanta Lima Peru.
Jawaab jenrry soto dextre
Osbin Martinez dijo
Saaxiibayaal, dhibaatooyin ayaan ku qabay dhalaalka shaashadda, waxay ahayd wax laga xumaado in lala shaqeeyo iftiinka ugu sarreeya markasta, waan ku qanacsanahay xalka Juan Carlos ee aan halkan hoose idinku xusuusinayo:
«@Alberto: Furayaasha xakamaynta dhalaalka waa inaad wax ka beddesho feylka / iwm / default / grub qaabka xididka. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa sadarradan:
Jawaab Osbin Martinez
jenrry soto dijo
Waad salaaman tihiin Fedora 17 saaxiibo waad ogtahay, feedora ayaan ku rakibey laptop-ka sony vaio VPCEK waligeyna ma hagaajin karin dhalaalka shaashadda, waxaan raacay fagaarayaal badan sidoo kale kan halkaan ka faalooda laakiin aniga ima aysan shaqeynin sidaas darteedna waan niyad jabay waxaan raadiyay qaybinta kale oo rakibay KUBUNTU 12.04
Ku jawaab jenrry soto
Hagaag, sidaan sheegayay, rakib Kubuntu 12.04 kadib markaan cusbooneysiiyey saacado kadib ayaan dib ubilaabay wax walbana way ila shaqeeyaan .Waxaan rajaynayaa in Fedora ay kujiraan darawalo qaas ah maxaa yeelay taas hadaad xakamayn karto dhalaalka shaashada, khaladaadka wifi, waxaan rajeynayaa in maalin maalmaha ka mid ah fedora ay si toos ah otomaatig u noqon doonto waxaan rajeynayaa in qaarkiin fadlan ii soo sheeg marka fedora taageerta dhalaalka shaashada ay soo baxdo maadama laptop-kayga uu yahay sony vaio VPCEK leh iyo radeon hd
Waxaan halkan u imid inaan isku dayo inaan raadiyo xal aan u maleynayo inuu la xiriiro dardargelinta qalabka. Dhibaatada ugu weyn ee aan ku qabo Fedora 17 iyo virtualbox waa inaan isku dayo inaan rakibo daaqadaha 8 laakiin waxay i weydiineysaa inaan dhaqaajiyo xawaaraha Hardware sidoo kale isku dayo inaan ku rakibo ciyaarta mashiinka farsamada iyo isla dhibaatada. Sida loo dhaqaajiyo tan, BIOS-kayga waa la howlgaliyay, horeyna rakibidii hore dhib kuma qabin (Windows 7 iyo Ubuntu 12.04).
Kombuyuutarkaygu waa VAIO leh pentium gudaha 4 ah 64-bit RAM ah
In virtualbox markaan soo galo qaabeynta ka dibna nidaamka "Dardargelinta" tab ayaa naafada ah. Ma aqaan wax aan sameeyo.
Kernel 3.4 hadda waa la heli karaa
Ubuntu Builder: sida loo dhiso noocyo u gaar ah Ubuntu